Ireo mpanjifa chat 12 tsara indrindra ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Ireo mpanjifa chat 12 tsara indrindra ho an'ny Linux
Ny fandefasana hafatra eo no eo (IM) dia endrika fifandraisana amin'ny fotoana tena izy eo anelanelan'ny olona roa na maromaro mifototra amin'ny lahatsoratra voasokajy. Ny lahatsoratra dia ampitaina amin'ny alàlan'ny fitaovana mifandray amin'ny tamba-jotra toy ny Internet.
Misy karazana protokol fandefasana hafatra eo noho eo maro samihafa. Ny tena lehibe dia XMPP (ampiasain'ny Google Talk, Jabber, sns), AOL Instant Messenger (AIM), ICQ, Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger (MSN Messenger taloha), ary ny Internet Relay Chat (IRC) hajaina. Ireo mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo izay miseho ato amin'ity lahatsoratra ity dia manohana ny iray na maromaro amin'ireo protécole ireo.
Mba hanomezana hevitra momba ny kalitaon'ny rindrambaiko misy, dia nanangona lisitry ny mpanjifa fandefasan-kafatra mailaka maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana 12 izahay. Antenaina fa hisy zavatra mahaliana eto ho an'izay te hiresaka amin'ny olon-kafa.
Ankehitriny, andao hizaha tanana ireo mpanjifa fandefasana hafatra miisa 12. Isaky ny lohateny dia nanangona ny pejin'ny vavahadiny izahay, famaritana feno miaraka amin'ny fanadihadiana lalindalina ny toetrany, pikantsary, miaraka amin'ireo rohy mahaliana sns.
8 Nihatsara ny gymache
Pidgin dia programa fandefasan-kafatra mailaka mamela anao hifandray amin'ny AIM, Jabber, MSN, Yahoo!, Ary tambajotra hafa. Fantatra tamin'ny anarana hoe Gaim izy fa nanova ny anarany vao haingana mba hisorohana ny fifanjevoana miaraka amin'ny mpanjifan'ny hafatra eo noho eo (AIM) AOL.
Pidgin dia mifangaro tsara amin'ny bara rafitra GNOME 2 and KDE. Io dia ahafahanao miasa nefa tsy terena hanana ny efijery lehibe (toerana misy ny lisitry ny mpifandray aminao) misokatra foana. Mila ahenainao fotsiny ilay izy ary dia izay.
Betsaka ny plugins azo ampiasaina hanampiana fampiasa vaovao amin'ity programa ity. Ohatra vitsivitsy amin'izany ny Album (izay mitahiry ireo kisary ifandraisanao), Plonkers (apetaho amin'ny lisitry ny chat) ny lisitry ny tsy firaharahianao), Sivana Talk, XMMS Remote, sns.
Misy ihany koa ny kinova Pidgin tsy misy sary miaraka amin'ny fanohanana ireo tambajotra fandefasana hafatra eo noho eo ihany. Antsoina hoe Finch ity programa ity.
Pidgin dia manohana ireto serivisy fandefasana hafatra manaraka ireto:
Fanohanana hahazoana fidirana amin'ny kaonty maro.
Fikandrana hafatra amin'ny tabety.
Fanohanana ho an'ny "vondrona".
Firaketana ny resaka sy resaka.
Windows windows fampandrenesana pop-up.
Fanohanana ny NSS, ary ny famandrihana hafatra an'ny mpizara ho an'ny protokol izay manohana azy.
Fanaraha-maso ny tsipelina mitambatra.
Fampidirina miaraka amin'ny faritra fampandrenesana asa.
Kopete no mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo KDE. Mamela anao hifandray amin'ireo namanao sy mpiara-miasa aminao amin'ny fampiasana serivisy fandefasan-kafatra isan-karazany, ao anatin'izany ny AIM, ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, IRC, Gadu-Gadu, Novell GroupWise Messenger, ary maro hafa. Natao ho rafitra malefaka sy be mpiorina misy protokolokala hampiasaina manokana sy ara-barotra.
Ny tanjon'ny Kopete dia ny hanome ny mpampiasa fomba mora hidirana amin'ny serivisy fandefasan-kafatra eo noho eo. Ny interface dia mampiseho ny fifandraisanao voalohany ary tafiditra ao amin'ny rafitry ny boky mifandraika miaraka amin'ny KDE hahafahanao miditra amin'ireo fifandraisana voatahiry miaraka amin'ireo rindranasa KDE hafa. Ny rafitry ny fampandrenesana Kopete dia azo havaozina ka ny fifandraisana manan-danja ihany no manintona ny sainao ary "manelingelina" anao mandritra ny fotoana iasanao. Kopete koa dia tonga miaraka amin'ny fitaovana hanatsarana ny fandefasan-kafatra eo noho eo, toy ny fanafenana hafatra, ny fitahirizam-bokin'ny resadresakao sns.
Io dia mamela ny vondrona vondrona ao anaty varavarankely, miaraka amin'ny flaps hahafahana manova ny resaka mora foana.
Fanohanana kaonty marobe.
Fanohanana amin'ny fampiasana Aliases ho an'ny olona mifandray aminao.
Ahafahanao manangona ireo olona ifandraisanao.
Fampidirina miaraka amin'ny KAddressBook ary KMai
Mitahiry firaketana ny resaka nataonao.
Ahafahanao manova ny fomban'ny fikandrana amin'ny chat amin'ny alàlan'ny XSL sy CSS
Fanohanana ho an'ny emoticons manokana
Pop-ups fampandrenesana manokana
Fanohanana Webcam amin'ny fampiasana MSN sy Yahoo!
Fanamarin-tena amin'ny tsipelina
Tohano amin'ny famindrana rakitra amin'ny alàlan'ny AIM sy ICQ
Fanohanana "identité" marobe ho an'ny mpampiasa tokana.
Psi dia mpanjifa fandefasana hafatra eo an-tsena manintona, miorina amin'ny protokol open source fantatra amin'ny hoe Jabber (XMPP).
Haingam-pandeha amin'ny asany sy voafehy amin'ny fampiasana loharanon-karena, Psi dia safidy tsara raha miresaka amin'ny namanao rehetra amin'ny alàlan'ny hafatra eo noho eo, na inona na inona tambajotra ampiasainy. Izany hoe, amin'ity programa tokana ity dia afaka hiresaka amin'ireo namana mampiasa ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger na AIM ianao.
Ny Psi dia manamboatra endrika mahaliana ary manana fampiasa maro karazana natao manokana hamaly ny filanao fifandraisana: hafatra manokana, vondrona miresaka, fandefasana rakitra, fari-pifandraisana isan-karazany, endrika lahatsoratra, sy maro hafa.
Tena azo namboarina
Fanohanana ny mombamomba
Flap chat windows
Fanohanana amin'ny chat vondrona
Serivisy Discovery mamela anao:
miresaka amin'ny namana izay mampiasa mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo
mitadiava namana mampiasa Jabber
mamorona na miditra amin'ny efitrano fihaonambe ahafahan'ny olona marobe mifampiresaka
Fanohanana ny resadresaka voarindra
Famindrana ny fisie
Fampandrenesana hafatra mampiasa GnuPGP
Jabbim dia mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo ho an'ny protokol XMPP / Jabber voasoratra manontolo ao Python fiteny mampiasa Qt, PyQt ary ny tranomboky Pyxl, izay ao anatin'ny programa.
Ny tanjon'i Jabbim dia ny hitondrana ny protokolon'i Jabber ho an'ny rehetra, ka izany no antony nananganana azy ho mpanjifa ho an'ny mpampiasa tsotra sy ny vao manomboka.
Jabbim dia azo ampiasaina hampifandray ireo mpizara Jabber mahazatra sy Google Talk. Manolotra fidirana amin'ny serivisy fandefasana hafatra "mihidy" toa ny MSN, AIM, Yahoo! IM, ICQ, Gadu-Gadu ary koa IRC.
Windows windows miresaka
Ireo lohahevitra ho an'ny rindranasa fampiharana sy chat
Fampandrenesana sary sy fandrenesana
Fanohanana amin'ny famolavolana resaka (XHTML-IM)
Mampahafantaro rehefa manoratra ny fifandraisana
Fanohanana ho an'ny fitantanana ny chat sy ny chat room ary ny antonony.
Tsoratadidy Groupchat ary manateza-tena.
Lisitry ny tsiambaratelo.
Tohano hametraka ny tenanao ao anaty "fanjakana" tsy hita maso mba tsy hahitan'ny mpifandray anao.
Sata fifandraisan-davitra (User Tune, Moodan'ny Mpampiasa, Hetsiky ny Mpampiasa, Fifampiresahan'ny Mpampiasa)
Plugins hanitatra ny fampiasa azy.
Gajim dia mpanjifa Jabber voasoratra ao Python, miaraka amina lohataona GTK +.
Ny tanjon'ity programa ity dia ny hanome mpanjifa XMPP feno ho an'ny mpampiasa GTK +.
Tsy mazava GNOME ho an'ny fihazakazahana.
Tohano ho an'ny chat group (mampiasa ny protokol MUC)
Emoticons, Avatar, PEPs (hetsiky ny mpampiasa, toerana misy azy, sns.)
Efitra chat ankafizinao.
Fanohanana ireo metacontact
Vato eo amin'ny tsoratry ny lahasa.
Tantaran'ny chat taloha.
Tohano ho an'ny encryption amin'ny alàlan'ny TLS, GPG ary SSL.
Discovery amin'ny serivisy ao anatin'izany ny Nodes, karoka ataon'ny mpampiasa
Wikipedia, rakibolana ary motera fikarohana
Fanohanana ho an'ny DBus.
Gajim est disponible en 24 langues.
Empathy dia programa fandefasan-kafatra mailaka mahery. Miorina amin'ny Telepathy sy Nokia's Mission Control. Izy io koa dia mampiasa ny interface interface Gossip.
Ny tena tanjon'ity fampiharana ity dia ny famelana ny fampidirina tsy misy tomika miaraka amin'ny birao. Ny fitehirizam-boky libempathy-gtk, ny "fon'ny" programa, dia tsy inona fa ny andiana widget izay azo ampidirina ao anaty rindrambaiko GNOME.
Tafiditra ao amin'ny birao ny empathy GNOME hatramin'ny andiany 2.24.
Multi-protocol: Jabber, Gtalk, MSN, IRC, Salut, ary ny protokolola rehetra tohanan'ny Pidgin
Tonian-dahatsoratry ny kaonty (mpizara mpampiasa manokana isaky ny protokolola)
Mandeha mandeha lavitra ary miparitaka lavitra mampiasa gnome-screensaver
Fifaneraserana mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny Network Manager
Resadresaka tsy miankina sy iraisan'ny vondrona (miaraka amin'ny emotikon sy mpanamarina ny tsipelina)
Ireo lohahevitra tsy manam-petra ho an'ny windows windows.
Firaketana ny resaka.
Manampia fifandraisana vaovao ary jereo / ovao ny mombamomba ny fifandraisana.
Antso am-peo sy horonan-tsary mampiasa SIP sy Jingle.
Famatorana Python ho an'ny libempathy sy libempathy-gtk.
Fanohanana ny asa fiaraha-miasa amin'ny fantsona.
BitlBee dia vavahady IRC ho an'ny Jabber, ICQ, AIM, Windows Live Messenger, Yahoo, ary Google Talk.
Ity programa ity dia miasa ho toy ny mpizara IRC, mamorona fantsona IRC miaraka amin'ireo mpifanerasera aminao ary mamela anao hiresaka amin'izy ireo toy ny hoe mpampiasa IRC tsotra izy ireo. Azo atao koa ny manambatra ny BitlBee amin'ireo mpanjifan'ny IRC avy amin'ny mpizaha tranonkala, toy ny cgi-irc.
Manohana ireto masontsivana manaraka ireto:
Windows Live Messenger (fantatra amin'ny anarana taloha hoe MSN)
Vondron-dresaka, miaraka amin'ny MSN sy Yahoo!
Hevitra / hoditra
Firaketana ny resaka
Nihatsara ny gymache
GYachI dia mpanjifa an'ny Yahoo! Messenger, nosoratana tamin'ny alàlan'ny GTK +.
Ity programa ity dia misy ny fahafahan'ny resadresaka am-peo, amin'ny alàlan'ny GYVoice, ary amin'ny fampiasana ny webcam, noho ny GyachI-Webcam. Ho fanampin'izay, ny programa dia misy ny GyachI-Broadcaster handefasana horonantsary video avy amin'ny webcam.
Jereo sy andefaso riaka video avy amin'ny webcam
Emesene dia programa fandefasana hafatra avy hatrany. Izy io dia "clone" an'ny Windows Live Messenger.
Ny tanjon'ity malefaka ity. dia ny mamerina ny asan'ny mpanjifa Windows Live izay fantatry ny mpampiasa Windows rehetra, fa ny manosotra ny endriny ary mahatonga azy io ho tsotra, tsara tarehy ary mora ampiasaina.
Misy karazana lohahevitra maro karazana, ao anatin'izany ny MBISM, ny lohahevitra mivantana ary ny MSN.
Ity programa ity dia voasoratra manontolo ao Python ary GTK +.
Tsotra sy mora ampiasaina interface
Emoticons azo namboarina
Hafatra ataon'ny mpilalao mozika manokana
Fanadalana na fihodinana
Midira amin'ny lisitry ny fifandraisana voatahiry ao amin'ny mpizara
Plugins (YouTube, hira, MSN Premium, Gmail checker, POP3 mail checker, spell checker, last.fm, Wikipedia. XKCD, Last Said, Countdown ary ny hafa)
Fifanarahana amin'ny fiteny maro.
aMSN dia klone iray hafa an'ny Windows Live Messenger. Io dia mamela anao hifandray amin'ny namanao ary hifanakalo hafatra sy rakitra.
Ny tena tanjony dia ny manampy ireo mpampiasa mampiasa WLM, programa iray tsy misy afa-tsy amin'ny Windows sy Mac ihany.
Mba hahatratrarana an'io tanjona io, aMSN dia manandrana maka tahaka ny "fijery sy fahatsapana" an'ny WLM ary ahitana ny endriny rehetra. Ankoatr'izay, aMSN dia manana fiasa manokana, tsy misy amin'ny WLM. Ankoatra ny zavatra hafa, ny mpampiasa dia afaka mametraka fanairana, mahita hoe iza no nanala azy ireo tamin'ny lisitry ny fifandraisana, ary avela hanokatra kaonty marobe amin'ny fotoana iray.
aMSN dia tena azo namboarina, miaraka amin'ny fanitarana sy lohahevitra sintonina avy amin'ny tranokala ofisialiny.
Ahafahanao miditra amin'ny kaonty mihoatra ny iray miaraka
Tantaran'ny resaka, misaraka amin'ny loko
Hoditra eo amin'ny varavarankely fifampiresahana
Fanavaozana mandeha ho azy ny glossaries sy plugins
Fanohanana ny serivisy MSN Mobile
Asehoy ny avatar amin'ny fifandraisana amin'ny hafatra fampandrenesana
Ahafahanao miditra ary manomboka amin'ny "fanjakana" iray
Fanamarinana kaonty mailaka
Mercury Messenger dia klone MSN malaza voasoratra ao amin'ny JAVA.
Miaraka amin'ny Mercury dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny MSN ianao. Na izany aza, Mercury dia manana fiasa fanampiny izay tsy tafiditra ao amin'ny MSN.
Mercury dia manana interface mifamadika, ary misy Java Looks sasany, toy ny Metal, CDE / Motif, ary GTK +.
Mamela ny fidirana amin'ny fampiasana kaonty marobe
Famindrana rakitra haingana
Resadresaka amin'ny horonan-tsary
Fampandrenesana amin'ny antsipiriany
Hetsika nofaritan'ny mpampiasa
Lisitry ny fifandraisana azo namboarina
Jery ​​hafatra azo namboarina
Sary masina azo namboarina
Mamela anao hitahiry ny fivezivezena webcam
Avatar, emotikon, sns.
Konferansa Audio / Video
Azo entina, avy amin'ny fahatsiarovana USB.
KMess dia safidy tsara hafa amin'ny MSN Messenger. Mamela anao hiresaka amin'ny namanao ... na mampiasa Windows na Mac aza izy ireo. = (
Ny teboka mahery an'ny KMess dia ny fampidirana azy amin'ny birao KDE, mifantoha amin'ny MSN Messenger ary fampifanarahana mpampiasa tena tsotra sy matanjaka.
Raha MSN ihany no ampiasainao, ho anao ity programa ity. Raha mampiasa ICQ na protokol miresaka hafa ianao dia tokony hifidy Kopete na Pidgin.
Famindrana rakitra haingana sy azo antoka.
Fanohanana ny fifandraisana mivantana MSN6 +, miaraka amin'ny topi-maso amin'ny rakitra
Emoticons azo namboarina.
Fanohanana ireo hafatra momba ny MSN7 +
Safidy endritsoratra sy loko.
Fanohanana ny "Milalao Ankehitriny"
Tohano ho an'ny Microsoft Live Mail. Kaontera mailaka ho avy, fampandrenesana rehefa tonga ny mailaka vaovao, ary mampifandray rohy mankany amin'ny boaty mailaka
Nudges sy winks (ho an'ny winks, ilaina ny mpilalao Adobe Flash sy ny cabextract)
Fanohanana amin'ny NetMeeting sy GnomeMeeting
Ny fifandraisana izay tsy nanampy anao tamin'ny lisitry ny fifandraisana dia miseho amina sora-mandry.
Rehefa manoratra ny mpifandray dia "hazava" ny avatar azy ireo
Asehoy / afeno ireo fifandraisana ivelan'ny Internet
Arindra ny lisitry ny fifandraisana amin'ny vondrona na amin'ny satan.
Fanohanana ho an'ny aliasases.
Fanohanana amin'ny fampiasana kaonty marobe
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ireo mpanjifa chat 12 tsara indrindra ho an'ny Linux
Michel dia hoy izy:
ny olona no tsara indrindra amin'ny kalitaony
Mamaly an'i michel
alexis garcia recinos dia hoy izy:
Ny tolakandro dia mila mpanjifa hametraka azy ao amin'ny tranonkalako aho ary amin'izany hiresahana amin'ny Internet mba hahitana raha misy olona afaka manohana ahy
Mamaly an'i alexis garcia recinos
Raha mampiasa WordPress ianao dia misy plugins maromaro izay WebChat dia jereo ao amin'ny pejy plugins WordPress hahitana hoe iza no tianao
juan jose muñoz rivera dia hoy izy:
Te hahafantatra famaritana momba ny serivisy ubuntu aho, izany hoe mametraka serivisy maro aho ny ubuntu toy ny: proftpd, apache, webmin ... fa te hahafantatra ny famaritana ny serivisy ubuntu aho. MISAOTRA
Mamaly an'i juan jose muñoz rivera
Sickle, ny famaky an'ny GNU / Linux
ISO Master, hamoronana sy hikajiana ireo ISO